Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Ny aretina mandindona, ny vidim- piainana miakatra hatrany
Inty sy Nday : Ny aretina mandindona, ny vidim- piainana miakatra hatrany
Mbola tsy resy tanteraka ny aretina coronavirus “covid 19” dia indro fa mananontanona sy mandindona sahady ny “variant Delta”. Mitaky fahamailoana sy fitandremana mafy io, ary mitaky fahaiza-miomana amin’ny fitaovana rehetra mety hotakiany koa.
Vesatra mbola mitambaby amin’ny fanjakana sy ny vahoaka io.
Etsy ankilany, tsy mitsaha-miakatra ny vidim-piainana. Voambara hatrany fa eo amin’ny tsena iraisampirenena mihitsy no misondrotra ny vidin’entana, na entana efa voahodina na mbola akora. Eo koa ny tsy fitsaharan’ny fitotonganan’ny sandan’ny vola ariary, izay manampy trotraka satria tsy maintsy vidiana amin’ny vola vahiny (devises) ny entana afarana.
Isika etsy ankilany, mbola marefo amin’ny fanodinana entana ara-indostrialy eto satria tsy nisy mpiaro ny indostriantsika hatrizay.
Ny vahoaka etsy andaniny, ambany dia ambany ny fahafaha-mividiny. Zara raha afaka miatrika ny harapaka.
Ny famokarana eto an-toerana koa, na ny fambolena na ny fiompiana na ny jono na ny fihariana hafa, tsy manana risi-po firy ny olom-pirenena satria ohatran’ny “kamboty velon-dray amandreny” no fiheverany ny tenany.
Ankoatra izany, io koa fa efa mananontanona sahady ny ho fiakaran’ny vidin-tsolika. Dia efa omanin’ny tompon’andraikitra ny sain’ny olom-pirenena amin’izy io.
Mody manipika ny hoe “mitsinjo ny mpanjifa” ny Ofisy Malagasy momba ny solika (OMH = Office Malagasy des hydrocarbures) nefa efa mandrangaranga avy hatrany sahady hoe “efa mihoatran’ny vidiny eto amintsika ny vidiny tena izy na “vérité de prix”. Mba lojika ry zalahy fa aza sokajiana ho zaza bodo hatrany ny vahoaka an!
Inona no misakana ny fitondram-panjakana tsy hikaro-dalana na hevitra hitanana ny vidin’ny solika tsy hiakatra, eny na ny hampidinana aza aza fa mavesatra amin’ny vahoaka loatra ilay izy ? Nahoana ny fitondram-panjakana no tsy miteny ary tsy mivolana ny amin’io fa ny “OMH” no aroso ? Amin’izay ve ny vahoaka tsy afaka haninona satria hoe “ny teknisiana no miteny ary resaka teknika no lazain’ny teknisiana ?”
Izay no ilàna mpitondra fanjakana. Vahaolana politika no ilain’ny vahoaka ary mpitondra fanjakana afaka mandray fanapahan-kevitra politika no heverin’ny vahoaka fa mitantana ny firenena amin’izao fotoana ka tsy misy antony tsy hahitan’ny mpitondra vahaolana politika.
Sa matahotra ny Banky Mondialy sy ny FMI indray?? Dia inona no nankalazantsika ny Tsingerin-taonan’ny fahaleovanatena tamin’ny sabotsy raha tsy afaka handray fanapahan-kevitra ho amin’ny fitsinjovana ny vahoaka Malagasy ianareo mpitondra fanjakana Malagasy ?
Izay ange no mbola anindrinay, araka ny lahatsoratra nataonay teto tamin’ny alatsinainy, hoe “vita ny fety fa mitohy ny fanjanahana” e !
Dia efa manipika izahay eto fa mampanahy koa ny hitroaran’ny vahoaka satria ny olana ara-tsosialy, sarotra ny mifehy ny tsy hipoahany rehefa mavesatra loatra amin’ny ambanilanitra ny vaikany.